Times Of Nepali » माइजुकी भदैनी -छ्या, मलाई तपाई भन्न पर्दैन, तिमी भने हुन्छ !
07 05 20 |
माइजुकी भदैनी -छ्या, मलाई तपाई भन्न पर्दैन, तिमी भने हुन्छ !
म पढाइमा पनि औसत मात्र छु। खास लक्ष पनि केही छैन। हुर्केकी छोरी भनेर बाबुआमाले कुरा छिनिदिए। मैले नाई भन्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। मेरो फूपुको भान्जा एकदिन भेट हुनेछ र मेरो दिल चोर्नेछ भनेर मलाई के थाहा। ठिकै छ, एउटा मिठो सपना बिचमै टुट्यो भनेर सोच्न पर्ला। जे होस, तिमीसँग बिताएको पल जीवनभरि सम्झना बनेर रहिरहनेछ।’ प्रशन्नले टाइप गर्‍यो।
समाप्त -नागरीक न्युज।
प्रकाशित मिति May 7, 2020